Videogiochi waxay la socotaa Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now 🥇 Emulator.online ▷
Ilaa dhowaan, si aad u ciyaarto cinwaannada fiidiyowga ee aad ugu jeceshahay, waa inaad iibsato qalabka ciyaarta ama aad sameysatid kombuyuutar qaali ah, iyo inaad la socoto sawirada sii kordheysa ee faahfaahsan, waa inaan si joogto ah u cusbooneysiinnaa kumbuyuutarka ama aan u iibsanaa mid. Konsol cusub qiyaastii 3-4 sano kasta. Laakiin isku xirnaanta internetka oo dhakhso leh, qaab cusub oo loogu ciyaaro ciyaaraha fiidiyowga ayaa bilaabay inuu qabto: kan ciyaaraha daruurta.
Fikradda ciyaarta daruurtu aad ugama duwana ciyaaraha caadiga ah ee khadka tooska ah ee laga helo internetka, iyadoo farqiga u dhexeeyaa dariiqyadan daruuriga ah ay suurtagal tahay maanta. ciyaaro xitaa ciyaaraha fiidiyowga ee ugu horumarsan (sida CyberPunk 2077), oo guud ahaan u baahan PC oo leh kaar muuqaallo gaar ah leh ama konsolle ah sida Playstation 4 ama 5. Xitaa isticmaalka kombuyuutarka caadiga ah iyo adigoon iibsan qalab gaar ah, sidaa darteed, waa lagu ciyaari karaa bilaa baloog iyo tayo garaaf sare leh, maaddaama ilaha lagama maarmaanka u ah socodsiinta ciyaarta ay bixiyaan bixiyeyaal fog oo awood badan leh, oo aan ku xirno internetka si aan u helno ciyaarta maqalka / muuqaalka fiidiyaha oo aan dirno gelinta taliska.
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa sida loogu ciyaaro khadka tooska ah kombiyuutar la'aan ama PC-ga ciyaarta ka faa'iideysiga adeegyada daruuraha ee daruuriga ah ee laga heli karo Talyaaniga oo si fudud loo heli karo xitaa iyadoo leh qadka Internetka ee aan si gaar ah u shaqeynaynin (sida iska cad, marwalba waa inaan iska ilaalinaa isku xirnaanta gaabiska ama isku xirnaanta ADSL, oo ​​hadda gebi ahaanba aan ku habboonayn inta badan adeegyada lagu bixiyo shabaqa).
AKHRISO: Sida loogu ciyaaro ciyaaraha PC-ga TV-ga
Sida loo ciyaaro ciyaaraha daruuraha
Sida ku xusan hordhaca, waxaan kaliya ku ciyaari karnaa daruuraha haddii aan leenahay xiriir internet oo kala duwan - ficil ahaan dhammaan adeegyada tani waa shuruudaha kaliya (marka laga reebo GeForce Now) sida waxa ka dhaca shaashadeenna waa durdur la tuuray waxay xamili kartaa kombuyuutar kasta xitaa 7 sano ama kabadan garbihiisa. Ka dib markaan aragnay shuruudaha, waxaan ku tusi doonaa adeegyada aad ugu adeegsan karto dalka Talyaaniga ee daruur daruuriga ah iyo waxyaalaha ku habboon ee lagu talin karo in la isticmaalo si khibradda ciyaaraha si dhab ah loo dhammaystiro.
Shuruudaha nidaamka iyo shabakadda
Ciyaaraha daruuriga ah, waxaan ubaahanahay khadka taleefanka ee internetka oo leh rukhsad fidsan (sidaas darteed ma jiraan wax lacag bixin ah ama lacag la'aan ah ama isku xirnaanta fiilooyinka) oo awood u leh buuxinta shuruudaha soo socda:
Xawaaraha soo dejinta: ugu yaraan 15 megabits ilbidhiqsi (15 Mbps)
Xawaaraha rarka: ugu yaraan 2 megabits ilbidhiqsi (2 Mbps)
Furka: in ka yar 100 ms
Si loo helo natiijada ugufiican, waxaan iska ilaalinaa isticmaalka isku xirka Wi-Fi ee udhaxeeya PC iyo modem waxaana doorbideynaa isku xirka Ethernet-ka: hadii modemku aad uga fogyahay PC-ga aan dooneyno inaan ku ciyaarno, waan awoodnaaama sharad ku dhig Isku xidhka khadka korontada ama soo noqnoqda 5 GHz Wi-Fi si loo wanaajiyo xasilloonida iyo xawaaraha isku xirka. Si aad u tijaabiso isku xirka internetka ee gurigaaga oo aad u ogaato inay ku habboon tahay ciyaarta daruurta, waxaan kugula talineynaa inaad ku socoto tijaabada xawaaraha maqaalkeenna "ADSL iyo Fibre Fiber: Sidee Loo Qiyaasayaa Xawaaraha Internetka?", Meesha ay ku filan tahay inaad hoos ugu rogto bogga oo aad riixdo badhanka tijaabada Start si aad isla markiiba u ogaato haddii aan buuxinno shuruudaha kor lagu soo sheegay.
Ciyaaraha daruuraha ayaa laga heli karaa Talyaaniga
Haddii xiriirkeena internetka uu kufilan yahay ka faa'iideysiga ciyaaraha daruuraha, waxaan ka dooran karnaa adeegyo fara badan inaan ku bilowno ka ciyaarista khadka tooska ah isla markaana aan lahayn qunsuliyad iyo PC la'aan ciyaarta.
Adeegga ugu horreeya ee aan kugula talineyno inaad isku daydo waa Google Stadia, oo laga heli karo bogga rasmiga ah isla markaana la socon kara biraawsarka Google Chrome (oo lagu rakibayo kombuyuutarkeena).
Adeeggan, waa ku filan tahay inaad haysato koontada Google oo aad iska qorto bil kasta oo ah .9,99 XNUMX si aad isla markiiba u ciyaarto ciyaaro badan, xitaa kuwa ugu dambeeya, oo leh tayo aad u sarreeya oo gudbinta iyo jawaabta amarka ee heerka ugu sarreeya ( mahadsanidiin adeegaha u heellan Google).
Haddii aan dooneyno inaan Google Stadia u soo galno qolka fadhiga oo aan ku ciyaarno TV-ga, waxaan tixgelin karnaa iibsashada xirmada Stadia Premiere Edition, oo bixisa a xakamaynta wifi stadia waa a Chromecast Ultra inuu daruurta uga ciyaaro TV kasta.
FIIRO GAAR AH: Haddii aad rabto iskuday Stadia bilaash oo hubi in khadkaaga internetka uu si dhakhso leh ugu filan yahay in lagu sii daayo ciyaaraha fiidiyowga, waad sameyn kartaa adigoon bixin kaarka deynta. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iska diiwaangeliso koontada tijaabada ah ka hor intaadan dhammaystirin diiwaangelinta, u isticmaal ikhtiyaarka inaad ku tijaabiso adeegga muddo 30 daqiiqo ah. Marka xigta, sheegasho mid ka mid ah cayaaraha bilaashka ah ee ay bixiso Stadia Pro oo bilow ciyaarta si aad u aragto haddii ay si fiican ugu shaqeyneyso kombuyutarkaaga.
Adeeg kale oo aan u adeegsan karno ciyaaraha daruuraha ayaa ah GeForce HADA, oo ay maamusho NVIDIA waxaana laga heli karaa bogga rasmiga ah.
Adoo iska diiwaangelinaya adeegga isla markaana soo dejinaya dalabka gaarka ah ee qalabkeenna, waxaan ku ciyaari karnaa bilaash bilaa xaddid la'aan hal saac maalintii, laakiin marin-u-dhac ku yimaadda (waa inaan ka helnaa meel bilaash ah server-yada); In si dhaqso leh loo wada ciyaaro dhamaan cayaaraha, adigoon sugin oo tayo sare leh (oo leh firfircoonida NVIDIA Ray Tracing), kaliya iska qor rukunka the 27,45, in la bixiyo 6dii biloodba mar. Si aad u awoodo inaad ku ciyaarto waxaa sidoo kale jira shuruudaha ugu yar ee loogu talagalay PC-ga la adeegsanayo, maaddaama codsigu adeegsanayo qaybta ugu yar ee kheyraadka nidaamka: in si wanaagsan loo ciyaaro waa ku filan tahay inaad haysato PC leh 4GB RAM iyo kaarka fiidiyowga ee taageera DirectX 11, sida lagu arkay bogga shuruudaha rasmiga ah. Si dhakhso leh loogu ciyaaro si taxaddar la'aan ah, waxaa laga yaabaa inaan tixgelinno isticmaalka NVIDIA SHIELD TV, dongle HDMI ah oo diyaar u ah in lagu isticmaalo ciyaaraha daruuraha oo laga heli karo Amazon wax ka yar € 200.
Adeeg kale oo wanaagsan oo aan isku dayi karno ciyaarta daruuraha ayaa ah PlayStation hadda, oo ay bixiso shirkadda Sony lagana heli karo bogga rasmiga ah.
Adeeggan waxaan ku ciyaari karnaa cinwaannada laga heli karo PS4 iyo PS5 sidoo kale kombuyuutarka, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan kala soo baxno arjiga gaarka ah ee Windows PC, ku gal koonto Sony ah oo bixinno bil kasta (€ 9,99 per bil). Haddii aan rabno inaan ku dhex ciyaarno daruurta qolka fadhiga ee TV-ga hortiisa, waxaan si aad ah uga faa'iideysan karnaa PS Now on PS4 Pro ama PS5, si looga fogaado iibsashada cayaaraha iyo ku ciyaarista Online-ka oo leh tayada ugu sareysa.
AKHRISO: JoyPads-ka ugufiican PC
Adiga oo dooranaya mid ka mid ah adeegyada daruuriga ah ee kor lagu muujiyey, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku ciyaarno khadka tooska ah kumbuyuutar la'aan iyo inaanan sameysano PC game (aad qaali u ah), bixinno khidmad bille ah oo go'an, ama iibsanno cinwaanno shaqsiyadeena aruurinta. (on Google Stadia). Adeegyada qaarkood sidoo kale gebi ahaanba waa bilaash, laakiin waxay leeyihiin waqti iyo xaddidaadyo xaddiga xawaaraha, sidaa darteed marwalba suurtagal maaha in loo ciyaaro sida lagu arko adeegyada lacag bixinta. Haddii xiriirkeena internetka uu ogolaado, aan siino kulan daruuro isku day ah, maadaama hada adeegeyaasha iyo iskuxirayaasha la isticmaalay ay yihiin kuwo qaan gaar ah oo awood u leh inay u wareegaan dhamaan khibrada ciyaaraha khadka tooska ah, iyagoo iska ilaalinaya dhamaan dhibaatooyinka la xiriira waxyaabihii hore ( kaarka fiidiyowga ee aan shaqeynayn ama PC-ga oo leh waxqabad liita).
Haddii aan jecel nahay ciyaaraha fiidiyowga, ha moogaanin liiska ugu fiican 60 kulan oo bilaash ah oo loogu talagalay PC.
Beddelka ugu wanaagsan ee barnaamijyada Google